Miaraka amin'ny anjely mpiambina ahy
“Mitandrema, fandrao manao tsinontsinona na dia ny iray aza amin’ireny madinika ireny hianareo; fa lazaiko aminareo: ny anjeliny any an-danitra mahita mandrakariva ny tavan’ny Raiko Izay any an-danitra” Mat. 18:10
Nandray anjara feno tamin’ny zavatra mitranga sy zavatra manjo ny olombelona ny anjelin’ny lanitra. Niseho tamin’ny olombelona izy, tamin’ny fanaovana akanjo manjelanjelatra tahaka ny tselatra; tonga tety an-tany niseho tamin’ny nedriky ny olombelona izy ireo, nanao ny akanjona olona avy nanao dia lavitra. Nanaiky ny fampiantranoana tany amin’ny tranon’olombelona izy ireo; nanao ny asan’ny mpitaridalana ho an’ireo mpanao dia lavitra, izay tsy mahalala na inona na inona , izy ireo.
Mety tsy fantatr’ireo mpanapaka an’izao tontolo izao fa matetika ireo anjely no niteny tany amin’ireny filan-kevitra nataony ireny. Nibanjina ireny anjely ireny ny mason’ny olombelona. Nihaino ny antson’izy ireo ny sofin’ny olombelona. Tany amin’ny efitrano malalaky ny lapan’ny tanana sy tany amin’ny toeram-pitsarana , dia nisy ireo mpitondra hafatry ny lanitra tonga nisolo vava ireo olona voahenjika sy voahosihosy. Nandresy ireo tanjona ratsy nokasain’ny ratsy izy ireo, ary nanakana ireo zavatra ratsy izay mety niteraka fijaliana ho an’ireo zanak’Andriamanitra. Ho vahana sy voaboasana amin’ireo mpianatry ny sekolin’ny lanitra izany rehetra izany.
Ho tsapan’ireo olona voaavotra tsirairay ny asan’ny anjely teo amin’ny fiainan’izy ireo. Ny anjely niambina azy fony fahakeliny indrindra; ny anjely niambina ny dia sy ny dingana rehetra nataony, ary niaro ny lohany tamin’ny fotoana naha-tandidomin-doza azy; ny anjely, , izay niaraka taminy tany amin’ny lohasaha misy aloky ny fahafatesana, izay nanisy marika ny toeram-pitsaharany, ary ilay anjely niarahaba azy voalohany tamin’ny marainan’ny fananganana amin’ny maty-hanao ahoana re izany hifampiresaka aminy izany e, ary hianatra ny tanataran’ny fidiran’Andriamanitra an-tsehatra teo amin’ny fiainan’ny isam-batan’olona , ny fiaraha-miasan’ny lanitra teo amin’ny asa tsirairay ho an’ny taranak’olombelona!
Afaka manana namana mpanaradia azy tahaka izany ny olombelona tsirairay, rehefa eny an-tanany ny baiboly. Azon’ny olombelona atao tsara mihitsy ny mitoetra eto amin’ity tany ity nefa miaina araka ny tontolon’ny lanitra (...) manakaiky kokoa hatrany hatrany ny tolam-baravarana fidirana ao amin’ilay tontolo maharitra mandrakizay. Tsy ho vahiny any amin’izany toerana izany ny tenany. Ireo feo izay hiarahaba dia tsy inona fa feon’ireo masina, izay tsy hita maso, kanefa namany sy mpiaradia taminy fony tety ambonin’ny tany-feo izay nianarany noavahana sy notiavina fony tety ambonin’ny tany. Izay olona, nanana fifandraisana tamin’ny lanitra teo amin’ny fiainanay , tamin’ny alalan’ny tenin’Andriamanitra, dia hahatsapa tena ho tompon-trano rehefa miaraka amin’ireo mponin’ny lanitra.